Mpampianatra nitokona Miha miverina mampianatra
Orinasa afaka haba Manomboka misesy ny fandefasana «chômage technique »
Mitombo isa hatrany ny tsy an’asa eto amintsika. Ho an’ny orinasa afaka haba dia efa nanomboka tamin’ny volana Janoary lasa teo izy ireny no nanala mpiasa tsikelikely noho ny tsy fisian’ireo akora fototra hafarana avy any ivelany hampiasainy
Mpivarotra kiraro fripy Matiantoka tanteraka
Velon-taraina tanteraka ireo mpivarotra kiraro fripy amin’izao fotoana izao nohon’ny fatiantoka mahazo azy ireo.
Tsy kely lalana ny ratsy Efa misy mpanendaka ireo mahazo Vatsy Tsinjo koa
Amin ny toerana maro misy ny fizarana fanomezana Vatsy Tsinjo avy amin’ny fitondrana dia misy ireo tovolahy manao andiany manaraka ny olona nahazo.
Anosipatrana Nizara fanomezana ny loharano
Nizara fanomezana ny omaly 07.04.20 ny loharano. Vary 6 kilao,menaka litatra,tsiasisa 8kp,savony 1,sira1,siramamy atsasakilao,vovo dronono soja
Tao aorian’ireo mpampianatry ny lisea maoderina Ampefiloha na LMA, izay nanapa-kevitra ny hampianatra nanomboka ny alatsinainy teo ary nanamafy ny fanazavan’ny minisitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fanofanana arak’asa fa
fanomezana ireo “Panier garnie” fa tsy noterena omena dia nanatontosa fanambarana iombonana ihany koa ny talata ireo solontenan’ny mpampianatry ny EPP anaty boriborintany 6 eto Antananarivo. Mpampianatra miisa 93 no nisolotena ireo izay resy lahatra ny hampianatra ary nanao antsoavo ihany koa ireo izay tsy mbola resy lahatra amin’izany tetsy amin’ny EPP Soarano. Isan’ny fanazavana nentin’ireto mpampianatra ireto moa ny hoe efa mafy no niainan’ireo mpianatra tamin’iny taona 2018 – 2019 iny ka heverina fa tsy mendrika azy ireo intsony ny mbola hiaina ny mafy noho ireny. Miantso ny feon’ny fieritreretan’ireo mpampianatra mbola misalasala, araka izany, ireto mpampianatra vonona hampianatra ireto, hoy hatrany ny fanambaran’izy ireo. Hita ho efa miverina tsikelikely ihany koa izay fampianarana izay ho an’ny Lisea Nanisana sy ny lisea teknika Ampasampito, raha ny hita omaly.